AHMAD LASA FILOHAN’NY KAONFEDERASIONA AFRIKANINA : Raikitra ny filaharambe
Karnavaly mamakivaky ny tanàna no niarahaban’ny mpomba an’i Ahmad noho ny fahalaniany ho filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina an’ny baolina kitra, ny alakamisy tolakandro teo. 21 mars 2017
Fiarakodia sy kodiaran-droa am-polony maro no nandray anjara tamin’izany. Betsaka kosa ny nahatsapa fa voninahitr’I gasikara ny nahavoafidy an’I Ahmad amin’io toerana io.
Na tsy nahitam-bokatra aza ny kitra malagasy nandritra ny taona maro nitantanany azy dia voninahitra lehibe ho an’ny firenena Malagasy ny hoe Malagasy no filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina. Ahmad izany no nisolo toerana ilay kameroney Hayatou Issa, nitondra ity Kaonfederasiona ity nandritra ny 29 taona. Tsiahivina fa filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra nandritra ny taona maro ihany koa i Ahmad, mpampianatra taranja fanatanjahantena no sady mpanazatra ny klioba AC Sotema teo aloha.
Mandeha ny resaka fa anisan’ny nanohana azy tamin’ny fifaninanany tamin’i Issa Hayatou i Fatma Samoura, izay tsy zoviana amin’ny Malagasy maro intsony noho ny asa vitany teto fony izy nisolo tena ny Firenena Mikambana. Irarian’ny maro kosa dia mba handray anjara amin’ny CAN amin’izay ny Malagasy.